Ipenthouse yobutofotofo enembono ebalaseleyo kwiCashel
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguPaul
Ngaba ukulungele ukuba 'wowed'?
Shiya inkathalo yakho yemihla ngemihla ekhaya kwaye ungene kwikhaya-kude-nekhaya njengaye nawuphi na omnye. Indlu yethu entsha yepenthouse yenzelwe iindwendwe. Ngeembono ezingenakuthelekiswa nanto zeLiwa leCashel, indawo esembindini enomona kunye nabo bonke ubumnandi obunokubujonga, awusoze ufune ukuhamba.
Relax kwi-penthouse yethu enemigangatho emibini, kanye embindini weCashel.
Nantsi into ongayilindela kukuhlala kwakho:
-Iimbono ezichukumisayo zeLiwa leCashel kuzo zonke iindawo zepenthouse
-Igumbi lokuhlala elinemigangatho ephindwe kabini elinendawo yomlilo yombane, isitulo seqanda esijingayo, ibhedi ekhululekileyo, i-4K smart TV, kunye nokufikelela kucango oluphindwe kabini kwibalcony enemibono emangalisayo yeLiwa.
-Igumbi lokulala elikhulu labucala elinobukhulu obunguKumkani (ubukhulu base-UK Super King) ibhedi, ukungena kucango oluphindwe kabini kwibalcony, i-4K smart TV, isipili esinobude obugcweleyo kunye newodrophu kunye neembono zeRock of Cashel.
-Iplani evulekileyo egcwele ukukhanya kwigumbi eliphezulu kunye nebhedi yobukhulu bukaKumkanikazi (ubukhulu bukaKumkani wase-UK), kunye nemibono yokufela.
-Ikhitshi elikhulu elixhotyiswe ngokupheleleyo elineoveni, imicrowave, isitovu sokungenisa, itoaster, iketile, ifriji/isikhenkcezisi, isitya sokuhlambela, iimbiza/iipani, kunye nemibono yeLiwa.
-Ibhalkhoni eyi-6m ende enetafile yealuminiyam etyhidiweyo kunye nezitulo kunye... uqikelele... iimbono zeRock of Cashel
-Indawo yokufunda epholileyo kunye nentaphane yeencwadi zokufunda kuyo (indawo ikwanemidlalo yebhodi, esibonelele ngayo ezimbalwa). Owu, kwaye i-nook ibonelela ngeembono ezigqibeleleyo zeLiwa leCashel
- Idesika ye-oki eqinileyo kunye nesitulo se-ergonomic esinombono weofisi ongenakoyiswa
-Amagumbi okuhlambela amabini amakhulu aneshawa, indlu yangasese kunye namampunge (enye phezulu, enye ezantsi)
- Iimfama ezilawulwa kude ezimnyama kwi-penthouse yonke
-Izibane ezicuthekileyo kulo lonke ekudaleni i-ambiance egqibeleleyo
-Izinto eziluncedo eziluncedo: intsimbi, i-ayina ibhodi, ishampu, ishampu, indawo yokuhlamba umzimba, isepha yezandla, iitawuli kunye nelinen, iiambrela, isomisi seenwele, iWiFi, iisokethi ze-USB.
-Iindawo zokutyela ezingapheliyo, ii-pubs, iivenkile kunye nezinto ezinomtsalane zonke kumgama wokuhamba
- Owu, kwaye ngaba sikhankanye umbono omangalisayo?!?
I-Cashel yeyona nto inqabileyo kwisithsaba se-County Tipperary- ivotele enye yezona ndawo zibalaseleyo kwihlabathi ukuba uzindwendwele ngo-2022!
Onke amagumbi kwi-penthouse aqhayisa ngemibono engenakuthelekiswa nanto yeLiwa leCashel elingalibalekiyo, enye yezona ngqokelela zimangalisayo zoyilo lwamaxesha aphakathi eYurophu (esusela kwi-12th - 13th century). Ngokuhamba kancinci kwemizuzu emibini, ungandwendwela iLiwa leCashel kwaye ujonge amakhubalo alo kufutshane (evulekileyo unyaka wonke). Emva koko unqumle usiya eHore Abbey, imonki yaseCistercian eyonakeleyo phakathi kwamasimi aluhlaza eCashel.
Ipenthouse ibekwe kanye kumbindi wedolophu yaseCashel, kunye neendawo zokutyela ezininzi (ukusuka kukutya kwe-pub ukuya kwindawo yokutya entle), ii-pubs ezinomtsalane, iikhefi, iibhaka, iivenkile ezinkulu kunye neevenkile ezithengisa ukutya konke kukuphosa ilitye nje ukusuka kumnyango wakho.
Uza kufumaneka kumgama nje ohamba imizuzu embalwa ukusuka kwiCashel Palace, emiselwe ukuphinda uvule ekuqaleni kuka-2022. Ibhotwe liya kuvula ngeendawo zokuzonwabisa ezikumgangatho ophezulu kunye neendawo zokutyela.
Ukuba unokuzitsalela kude namakhubalo eCashel, awuzukufumana kunqongophala kohambo losuku ukonwabela kwindawo esembindini yeCashel. Kwabo bahamba ngebhasi, indawo yokumisa ibhasi yimizuzu emi-3 kuphela ukusuka kumnyango wakho idibanisa iCashel neDublin kunye neCork.
Into yokugqibela oyifunayo emva kokuhamba yingxaki yokulungiselela ukudibana ukuqokelela izitshixo. Siza kuqhagamshelana nawe ngaphambi kokuhlala kwakho ukuze sikunike iikhowudi ezifunekayo ukufikelela kwipropati, emva koko ukhuphe izitshixo umva xa uhamba!
Into yokugqibela oyifunayo emva kokuhamba yingxaki yokulungiselela ukudibana ukuqokelela izitshixo. Siza kuqhagamshelana nawe ngaphambi kokuhlala kwakho ukuze sikunike iikhowudi ez…